​समाचार छापिएपछि छोराले गाली गर्न भए पनि फोन त गर्‍यो !
Sun, May 27, 2018 | 15:38:52 NST
16:31 PM (12 months ago)
Total Views: 133.3 K
कृष्ण बहादुर/सेतीमाया मोक्तान , परवानीपुर २ आहालदमार, सर्लाही ।
छोरालाई विदेश पठाएर हामीले के पायौं ? घरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला भएको छोरा मलेसिया गएपछि हामीले पाएको भनेको घर चलाउने जिम्मेवारी र चिन्ता मात्रै हो ।
विदेश गएको छोराले कमाउँछ भन्ने आशा थियो तर फोन नै गर्न छोड्यो । छोरा विदेशिएको जति समय बढ्दै गयो उति नै उसको मन कठोर हुँदै गयो । अभिभावक भएकोले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी दुःख गरेर भए पनि पूरा गरिरहेका छौं ।
गर्भवती छोडेर गएको हो छोरा, हामीले बुहारीको रेखदेख र स्याहार गर्यौँ । अहिले त नाति पनि ५ वर्षको भइसक्यो । नत बाबुले छोराको मुख देख्न पाएको छ न यो नातिले नै आफ्नो बुवाको ।
हाम्रो कस्तो बिडम्बना छोराले फोन गर्दा पनि खुशी हुनु परेको छ । जे भए पनि तपाईले लेखिदिएको खबरले काम गर्यो । उसले फोन गर्यो । तर फोनमा सन्चो बिसन्चो केही सोधेन । उसले म यहाँ बस्न आएको होइन अनि किन समाचार निकाल्नुपर्यो भनेर गाली गर्यो ।
तर हामीले कसले समाचार निकाल्यो थाहा छैन तर तेरो फोन आउन समाचार नै निकाल्नुपर्ने रैछ हैन भनेर भन्यौं । त्यसपछि भने उसले अरु केही भनेन अब चाहिँ अहिले मैले गरेको नम्बरमा फोन गर्नु भनेको छ ।
उसले फोन गरेको कुरा हाीले बुहारीलाई पनि सुनायौं । बुहारीले त खुशीको आँसु नै खसालिन् । अब त तनाव कम भयो । राजा घरमा आएर आफ्नो परिवार समालेर बसोस । हामीलाई उसले कमाएको पैसा पनि चाहिँदैन । उसको परिवारको भार पनि उसैले उठाओस् । हामी बुढो भयौं । घरव्यवहार सम्हाल्ने हिम्मत पनि छैन ।
(प्रस्तुती : दुर्गाप्रसाद भट्टराई, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता, सर्लाहीको ग्रमिण नारी उत्थान संघ हरिपुरको सहजीकरणमा हरिऔनमा संचालित सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र)